मिसेस नेपाल लागि आवेदन खुल्यो:: Naya Nepal
मिसेस नेपाल लागि आवेदन खुल्यो
काठमाडौं । ‘मिसेस नेपाल २०२०’को आवेदन खुल्ला भएको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोजक इप्लानेट प्रालिले प्रतियोगिताका लागि आवेदन खुल्ला भएको जनाएको हो ।बिवाहित महिलाहरुको सौन्दर्य निखार्दै उनीहरुको व्यक्तित्व विकाश गर्ने उद्देश्य रहेको ग्रिन आर्ट्स नेपालको संयोजनमा आयोजना हुँदै आएको प्रतियोगितामा यो वर्ष कोभिड १९ को महामारीलाई ध्यानमा राखेर अनलाइन तथा अफलाइन दुबै माध्यमबाट आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतियोगिताका लागि आवेदन दिने मध्य पनि आन्तरिक छनौटमा परेका उत्कृष्ट प्रतियोगीलाई मात्र ‘मिसेस युनिभर्स–२०१९’ अनिला श्रेष्ठलगायत विभिन्न वरिष्ठ ब्यक्तिहरुबाट प्रशिक्षण प्रदान गरिनेछ । २१ वर्षदेखि ५५ वर्ष उमेर बीचका विवाहित नेपाली महिलाले मात्र प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् ।गृहिणी जीवन बिताइरहेका महिलालाई सौन्दर्यता बाहेक सामाजिक क्रियाकलापदेखि आफ्नो व्यक्तित्व विकास गराउनेसम्म धेरै किसिमको काममा सक्रिय सहभागीता जनाउने अवसर प्रदान गर्न प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको आयोजक संस्था इप्लानेटका अध्यक्ष सन्तोष सापकोटाले जानकारी दिए प्रतियोगिताको विजेताले विभिन्न गिफ्टको अलवा सन् २०२१ मा हुने ‘मिसेस युनिभर्स’मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।यसअघि ‘मिसेस युनिभर्स’मा नेपालको प्रतिनिधत्व अनिला श्रेष्ठ, मनिषा डंगोल, पद्मिनी झा, रजनी थापा, मिना घिमिरेले गरेका थिए ।
अविश्वासको प्रस्ताव कायमै छ, छलफल गर्ने ठाउँ र पात्र मात्रै बदलिएका हुन् : यामलाल कँडेल
काठमाण्डौ – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाकै १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै नेकपाभित्रको विवाद फेरि बल्झिएको छ । प्रदेशले विवाद मिलाउन नसकेपछि केन्द्रका दुई अध्यक्षले प्रदेशका प्रमुख पदाधिकारीहरुलाई सबै काम यथावत् राखेर काठमाण्डौ बोलाएका छन् ।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्रमा मुख्यमन्त्री शाही, अविश्वासको मुख्य प्रस्तावक यामलाल कँडेल र अरु केही नेतालाई काठमाण्डौ आउन भनिएको छ । योसँगै कर्णालीको विवाद तत्काललाई टरेको हो त ? अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरुको तयारी अब के छ ? यसै विषयमा टेकमान शाक्यले मुख्य प्रस्तावक कँडेलसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
आवश्यक छलफलका लागि दुई दिनभित्र काठमाण्डौ आइपुग्न भनेर तपाईँहरुलाई केन्द्रले भनेको छ । काठमाण्डौ हिँडिसक्नुभयो कि सुर्खेततिरै हुनुहुन्छ ?
दुई अध्यक्षले बोलाउनुभएको छ क्यारे ! अहिले त म सुर्खेतमै छु । हेरौँ के हुन्छ, अहिलेसम्म ठ्याक्कै के गर्ने भन्ने ‘माइण्ड मेकअप’ गरेको छैन । केन्द्रबाट ताकेता आएको भए पनि काठमाण्डौ नै जाने भन्ने मनस्थिति बनाइसकेको छैन मैले ।
तपाईँहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएपछि अहिले के भइरहेको छ ? तपाईँहरुले के–कस्तो गृहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ ?
अविश्वासको प्रस्ताव यथावत् छ, छलफल गर्ने ठाउँ बदलिएको हो । सुर्खेतमा छलफल गर्नुपर्ने ठाउँमा काठमाण्डौमा गर्नुपर्ने भयो । अर्को कुरा भनेको छलफलमा भाग लिने पात्रहरु बदलियो । हिजो प्रदेशका माननीयहरुका बीचमा छलफल हुन्थ्यो भने अब केन्द्रका दुई अध्यक्षको रोहबरमा छलफल हुने भयो । हाम्रा तर्फबाट राख्नुपर्ने विषय यथावत् नै छन् । प्रस्तावबारे अडान कायमै छ, छलफल गर्ने ठाउँ र पात्र मात्रै बदलिएका हुन् ।
दुई अध्यक्षबीच कसरी प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ ?
दुई अध्यक्षका अगाडि म त यसै पनि फुच्चे भइ हालेँ । उहाँहरुको अगाडि फुटपाथे नै भएँ नि हैन र ? उहाँहरुको सल्लाह बेगर फुटपाथमा बसेर म यसो गर्छु भनेर घोषणा गर्नु त भएन नि हैन र ? अब उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ, त्यसपछि भनौँला ।
केन्द्रले तपाईँहरुको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गराउने एकखालको कसरत गरिरहेको बुझिएको छ । अब के गर्नुहुन्छ ? प्रस्ताव फिर्ता हुन्छ ?
अहिले मिडियामा हुँदै नभएको निष्कर्षसहितका खबरहरु आइरहेका छन् । अध्यक्षज्यूहरुले अहिलेसम्म प्रस्ताव फिर्ता गर्न भनेर भन्नुभएकै छैन । दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नुभएको चिठी मेरो हातमा छ, कर्णालीमा देखिएको समस्याबारे आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको उहाँहरुले चिठीमा उल्लेख गर्नुभएको छ । अहिलेको अवस्था यथावत् राखेर छलफलका लागि काठमाण्डौ आउनू भनिएको छ ।
चिठीमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्नु भनिएको छैन । चिठीको भाषाले त प्रस्ताव फिर्ता गर्न नै भनिएको छैन भने हामी कसरी पछाडि हट्ने हो र भन्नुस् त । मलाई कसैले यस विषयमा यो गर् र त्यो गर् भनेर भनेका छैनन् । अहिलेको अवस्थालाई यथावत् नै राख्नु भनेको त अविश्वासको प्रस्ताव पनि फिर्ता नलिइकन यथावत् नै राख्नु भनेको हो नि हैन र ।
उसो भए, केन्द्रले प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेर अर्को पत्र काट्यो भने तपाईँहरु मान्ने कि नमान्ने त ?
मैले भनिसकेँ त अहिलेसम्म मेरा विषयहरु यथावत् छन् भनेर । दुई अध्यक्षले के भन्छन् भनेर अहिले नै मनस्थिति बनाउने कुरा त आउँदैन नि । म जहाँ गएर पनि आफ्नो कुरालाई पुष्टि गर्न सक्छु । जे कुराले अविश्वासको प्रस्ताव राखिएको हो, यो एक्कासी आएको होइन । हामी १८ जना साथीहरुले धेरै सोचेर नै प्रस्ताव ल्याएका हौँ । अब पछि के होला भन्नेतिर नजाउँ न ।
तपाईँ आफू पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भएको हुनाले तपाईँले सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध गतिविधि गर्दै आउनुभएको भन्ने छ नि ?
म मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भएकोले शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको भन्ने कुरा गलत छ । मलाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि किन मेरा पछाडि अरु १७ जना व्यक्ति लाग्ने हो र ? उनीहरु सबैलाई मैले पद दिन सक्छु र ? प्रस्तावको समर्थनमा त सबै पक्षका नेताहरु छन् नि छैनन् र ? गुटगत हिसाबले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको नभइ हामी सबै विषयमा एक ठाउँमा आएको मात्रै हो । कसैले केपीलाई मान्लान् त कसैले प्रचण्ड र नेपाललाई मान्लान् । तर कर्णाली प्रदेशको विकासमा मुख्यमन्त्री शाहीको भूमिकाको सवालमा हामी एकजुट भएका हौँ ।
तर तपाईँहरुले प्रदेशको विवाद प्रदेशमै मिलाउन सक्नुभएन, विवाद केन्द्रमै आइपुग्यो । विवाद समाधान गर्न किन सक्नुभएन ?
पार्टीका दुई अध्यक्षले जे–जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने भन्ने संस्कार विकास भएको छ । पार्टी चलाउनका लागि त नेकपाको विधान बनेको छ । केन्द्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीले के–के गर्ने भनेर बाँडफाँड नै भएको छ । तर फेरि अहिले केन्द्रकै हस्तक्षेप किन भन्ने मेरो पनि प्रश्न हो । हामीले त पाएको अधिकार प्रयोग गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हौँ । हामीलाई हाम्रो काम गर्न दिए हुने नि भन्या । मुख्यमन्त्रीज्यूले आफ्नो भूमिका देखाउन सक्नुभएन, यो सबै उहाँकै कारण भएको हो ।
मङ्गलबार मात्रै तपाईँहरु १८ जनामध्ये माधव नेपाल निकट मानिने सात जना सांसदहरु त पछि हटिसके । बाँकी तपाईँहरु के गर्नुहुन्छ ?
अरुले के गर्छन्, त्यसको जिम्मेवारी लिन म सक्दिनँ । मिलिसक्यो, ढिसमिस भइसक्यो, यो भइसक्यो र त्यो भइसक्यो भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने म बाहेक अरु १७ जनाको पनि जिम्मा लिन सक्दिनँ म । म आफ्नो कुरा प्रष्ट पार्छु, मेरो तर्फबाट विषय यथावत् नै छ । किनभने म प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये पहिलो नम्बरको माननीय सदस्य हुँ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक बदल्नुभयो र सचेतकमा पनि नयाँ नियुक्ति गरिसक्नुभएको छ । अब के हुन्छ ?
अब हेर्नुस्, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यो दलको नेताले कसरी नयाँ नियुक्ति गर्न मिल्छ ? विधानले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि कुनै निर्णय नै गर्न नपाउने भनेको छ भने उहाँले कसरी फेरबदल गर्न पाउनुभयो ? जसले बैठकको समेत नेतृत्व गर्न पाउँदैन भने उसले अर्को नियुक्ति गर्न पाउँछ ? जसले बैठक बोलायो उसैलाई खारेज गर्न मिल्छ ? यो कुनै न्यायोचित कदम हो ? उहाँ अस्वभाविक बाटोबाट हिँडिरहनुभएको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्तापछि तपाईँ र मुख्यमन्त्री शाहीबीच केही कुराकानी भएको छ ?
मुख्यमन्त्रीज्यूले यसलाई सामान्य प्रक्रियाको रुपमा लिनुहुन्छ होला भनेर सोचेका थियौँ । यसमा केही भन्नु छ भने भन्नुहोला भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मैले नै सोधेको थिएँ । प्रस्ताव दर्ता गराउँदा उहाँले मेरो केही पनि भन्नु छैन भनेर भन्नुभयो । मलाई उहाँले छलफलका लागि बोलाउनुहुन्छ कि भन्ने आशा लागेको थियो । तर उहाँले हामीसँग ‘फेस’ गर्न नै तयार हुनुभएन । उहाँ बैठक छल्नका लागि विभिन्न प्रयत्नतिर हिँड्नुभयो । प्रमुख सचेतकले बैठक बोलाएलगत्तै उहाँले प्रमुख सचेतक नै बदल्नुभयो । यो सबै घटनाक्रम त मुख्यमन्त्रीज्यूले नै सिर्जना गर्नुभएको हो नि । यो त ‘हायर एण्ड फायर’ को बाटोतर्फ उन्मुख भयो नि, हैन ?
अन्तिममा, तपाईँ काठमाण्डौ आउने कि नआउने त ?
अहिले आउने र नआउनेको जवाफ दिन म सक्दिनँ । अहिले नै काठमाण्डौ आइहाल्ने मनस्थितिमा पनि छैन । हेरौँ परिस्थितिले के बताउँछ । जतिसुकै चित्त बुझे पनि, नबुझे पनि यसको पहलकर्ता मुख्यमन्त्री हुनुपर्थ्यो । उहाँले मसँग कुनै संवाद नै गर्न चाहनुभएको छैन । हामीले प्रस्ताव लगेर बुझाएपछि उहाँले त पहलकदमी पो गर्नुपर्थ्यो त । उहाँबाटै समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने ठाउँमा अहिले काठमाण्डौले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।